မျက်နှာအနေအထားပေါ်မူတည်ပြီး အလိုက်ဖက်ဆုံး မျက်မှန်ကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ
25 Apr 2018 . 11:33 AM
နေရောင်ပြင်းပြင်းကျရောက်တဲ့ နွေရာသီမျိုးမှာ အရေပြားအတွက် ထိခိုက်စေတဲ့ UV Rays တွေကနေ ကာကွယ်ဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ နွေရာသီ Fashion လေးကို ပြီးပြည့်စုံဖို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ထသွားထလာ သယ်နေကျ ကိုယ့်ရဲ့ အိတ်ထဲမှာ နေကာမျက်မှန်လေးတစ်လက်လောက်တော့ လိုအပ်မှာပဲနော်။ ခက်တာက မျက်မှန်လေးဝတ်ပြီး နေရောင်လည်းကာ၊ Fashion လည်းကျဖို့ဆို အဲ့မျက်မှန်က ကိုယ့်မျက်နှာကျပေါ်မူတည်ပြီး လိုက်ဖက်တဲ့ အနေအထားရှိဦးမှ မဟုတ်လား? ဒီတော့ကာ မိန်းကလေး၊ ယောက်ျားလေးတိုင်းအတွက် မရှိမဖြစ် လိုကိုလိုအပ်တဲ့ Fashion ကျကျ မျက်မှန်လေးတွေကို ကိုယ့်မျက်နှာကျပေါ်မူတည်ပြီး ဘယ်လိုရွေးကြမလည်း ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
မျက်နှာကျပေါ် မူတည်ပြီး ရွေးမှာဆိုတော့ ပထမဦးဆုံး ကိုယ့်မျက်နှာကျကို အရင်သိအောင် ပုံဖော်ကြည့်ကြရအောင်။ ကိုယ့်ရဲ့ ဆံသားလိုင်းက ကျယ်ကျယ်ဝိုင်းဝိုင်းဖြစ်နေတာမျိုး၊ နဖူးပြင်က ကကြီးပုံ ကျယ်ပြန့်တာမျိုး၊ မေးရိုးချွန်တာမျိုးဆို အသည်းပုံပါတဲ့။ မျက်နှာကျအနေအထား ဖူးပြည့်နေပြီး အလျားရော ဒေါင်လိုက်ရော ချွန်ထက်ခြင်းမရှိဘဲ မေးရိုးဝိုင်းဝိုင်းလေးတွေ ဆိုရင်တော့ ဝိုင်းတဲ့မျက်နှာသွင်ပြင်ပါ။
မေးရိုးရော၊ ဆံသားလိုင်းရော ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝိုင်းပြီး မျက်နှာကျ အချိုးညီရင်တော့ လေးထောင့်ကျတဲ့ မျက်နှာကျပါ။ မျက်မှန်လှလှလေးဝတ်ဖို့ ကံအကောင်းဆုံး မျက်နှာကျပိုင်ရှင်တွေကတော့ ဘဲဥပုံ မျက်နှာကျပိုင်ရှင်တွေပါ။ ဆံသားလိုင်း ရှည်ပြီး မျက်နှာကျတစ်ခုလုံးသွယ်ကာ မေးရိုးချွန်တဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်တွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဆို ဒီလိုမျက်နှာကျလေးတွေအလိုက် ဘယ်လိုမျက်မှန်ပုံစံလေးတွေက အသင့်တော်ဆုံးလဲဆိုတာ ပုံဥပမာလေးတွေကြည့်ပြီး ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။
အသည်းပုံမျက်နှာပိုင်ရှင်တွေရဲ့ မျက်မှန်ရွေးချယ်ပုံ စံနှုန်းကတော့ မေးရိုးချွန်ချွန် နဲ့ နဖူးကျယ်ကျယ်ကို လိုက်ဖက်ညီစေတဲ့ မျက်မှန် Frame မျိုး အထူးသဖြင့် အပေါ်ပိုင်း Frame ကားကား Cat Eye ပုံစံ၊ အပေါ် Frame ပဲပါတဲ့ Brow Line ပုံစံမျိုးနဲ့ လေးထောင့်ဆန်တဲ့ Retro Square ပုံစံမျိုးတွေကအသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
heart shaped face and right sunglasses
(၂) မျက်နှာကျ ဝိုင်းဝိုင်းပိုင်ရှင်
မျက်နှာကျ ဝိုင်းသူတွေအတွက်တော့ မျက်နှာကိုပိုသေးသွယ်စေမယ့် Frame ကြီးပြီးကားတဲ့ မျက်မှန်ပုံစံတွေ၊ Cat Eye ပုံစံတွေ၊ အဓိကက မျက်မှန်ထောင့်ကိုပေါ်စေတဲ့ Frame မျိုးတွေကိုရွေးချယ်တတ်ဖို့ပါပဲ။ ကိုင်းသားပေါ်တဲ့ လေးထောင့်ဆန်တာမျိုးတွေ၊ Upsweat Frame မျိုးတွေလည်း အဆင်ပြေပါတယ်။
round shaped face and right sunglasses
(၃) လေးထောင့်ဆန်တဲ့ မျက်နှာကျပိုင်ရှင်
လေးထောင့်ဆန်တဲ့ မျက်နှာကျတွေအတွက်တော့ အဲ့လိုလေးထောင့်ဆန်တာမျိုးကို ဖုံးဖို့ ဆန့်ကျင်ဘက် Frame မျိုးတွေဖြစ်တဲ့ ဘဲဥပုံ Frame မျိုး၊ Frame အဝိုင်းမျိုးကို ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
square shaped face and right sunglasses
သူတို့အတွက်ကတော့ မျက်နှာအသွင်ပြင်အနေအထားကိုက ပုံကျလှပပြီးသားဖြစ်နေတာမို့ ဘယ်လို Frame မျိုးနဲ့မဆို လိုက်ဖက်သူပါ။ အထူး Recommend ပေးချင်တာဆို Geometric Shapes တွေဖြစ်တဲ့ စတုရန်းပုံစံ၊ လေးထောင့်ပုံစံတွေရွေးနိုင်ပါတယ်။ မျက်လုံးသားတစ်ဝိုက်နားမှာ ပိုကျယ်ပြန့်စေတဲ့ ပုံစံကိုရွေးချယ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်ဆံပင်သားနဲ့ မျက်လုံးသားအရောင်ကိုကြည့်ပြီး လိုက်ဖက်တဲ့ Frame အရောင်ရွေးချယ်တာလည်း ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။
oval shaped face and right sunglasses
ဒီလောက်ဆို ကိုယ့်မျက်နှာအနေအထားအရ လိုက်ဖက်မယ့် မျက်မှန်ပုံစံလေးတွေကို စာဖတ်ပြီးဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပုံလေးတွေကြည့်ပြီးဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ရွေးချယ်ဝယ်ယူပြီး ကိုယ့်ရဲ့ Summer Look လေးကို ပြီးပြည့်စုံအောင် ဖန်တီးနိုင်ပါပြီနော်။
မကျြနှာအနအေထားပျေါမူတညျပွီး အလိုကျဖကျဆုံး မကျြမှနျကို ဘယျလိုရှေးခယျြမလဲ
နရေောငျပွငျးပွငျးကရြောကျတဲ့ နှရောသီမြိုးမှာ အရပွေားအတှကျ ထိခိုကျစတေဲ့ UV Rays တှကေနေ ကာကှယျဖို့ပဲဖွဈဖွဈ၊ ကိုယျ့ရဲ့ နှရောသီ Fashion လေးကို ပွီးပွညျ့စုံဖို့ပဲဖွဈဖွဈ ထသှားထလာ သယျနကြေ ကိုယျ့ရဲ့ အိတျထဲမှာ နကောမကျြမှနျလေးတဈလကျလောကျတော့ လိုအပျမှာပဲနျော။ ခကျတာက မကျြမှနျလေးဝတျပွီး နရေောငျလညျးကာ၊ Fashion လညျးကဖြို့ဆို အဲ့မကျြမှနျက ကိုယျ့မကျြနှာကပြျေါမူတညျပွီး လိုကျဖကျတဲ့ အနအေထားရှိဦးမှ မဟုတျလား? ဒီတော့ကာ မိနျးကလေး၊ ယောကျြားလေးတိုငျးအတှကျ မရှိမဖွဈ လိုကိုလိုအပျတဲ့ Fashion ကကြ မကျြမှနျလေးတှကေို ကိုယျ့မကျြနှာကပြျေါမူတညျပွီး ဘယျလိုရှေးကွမလညျး ကွညျ့လိုကျကွရအောငျ။
မကျြနှာကပြျေါ မူတညျပွီး ရှေးမှာဆိုတော့ ပထမဦးဆုံး ကိုယျ့မကျြနှာကကြို အရငျသိအောငျ ပုံဖျောကွညျ့ကွရအောငျ။ ကိုယျ့ရဲ့ ဆံသားလိုငျးက ကယျြကယျြဝိုငျးဝိုငျးဖွဈနတောမြိုး၊ နဖူးပွငျက ကကွီးပုံ ကယျြပွနျ့တာမြိုး၊ မေးရိုးခြှနျတာမြိုးဆို အသညျးပုံပါတဲ့။ မကျြနှာကအြနအေထား ဖူးပွညျ့နပွေီး အလြားရော ဒေါငျလိုကျရော ခြှနျထကျခွငျးမရှိဘဲ မေးရိုးဝိုငျးဝိုငျးလေးတှေ ဆိုရငျတော့ ဝိုငျးတဲ့မကျြနှာသှငျပွငျပါ။
မေးရိုးရော၊ ဆံသားလိုငျးရော ကယျြကယျြဝနျးဝိုငျးပွီး မကျြနှာကြ အခြိုးညီရငျတော့ လေးထောငျ့ကတြဲ့ မကျြနှာကပြါ။ မကျြမှနျလှလှလေးဝတျဖို့ ကံအကောငျးဆုံး မကျြနှာကပြိုငျရှငျတှကေတော့ ဘဲဥပုံ မကျြနှာကပြိုငျရှငျတှပေါ။ ဆံသားလိုငျး ရှညျပွီး မကျြနှာကတြဈခုလုံးသှယျကာ မေးရိုးခြှနျတဲ့ မကျြနှာပိုငျရှငျတှဖွေဈပါတယျ။ ဒါဆို ဒီလိုမကျြနှာကလြေးတှအေလိုကျ ဘယျလိုမကျြမှနျပုံစံလေးတှကေ အသငျ့တျောဆုံးလဲဆိုတာ ပုံဥပမာလေးတှကွေညျ့ပွီး ရှေးခယျြဝယျယူနိုငျပါပွီ။
အသညျးပုံမကျြနှာပိုငျရှငျတှရေဲ့ မကျြမှနျရှေးခယျြပုံ စံနှုနျးကတော့ မေးရိုးခြှနျခြှနျ နဲ့ နဖူးကယျြကယျြကို လိုကျဖကျညီစတေဲ့ မကျြမှနျ Frame မြိုး အထူးသဖွငျ့ အပျေါပိုငျး Frame ကားကား Cat Eye ပုံစံ၊ အပျေါ Frame ပဲပါတဲ့ Brow Line ပုံစံမြိုးနဲ့ လေးထောငျ့ဆနျတဲ့ Retro Square ပုံစံမြိုးတှကေအသငျ့တျောဆုံးပါပဲ။
(၂) မကျြနှာကြ ဝိုငျးဝိုငျးပိုငျရှငျ
မကျြနှာကြ ဝိုငျးသူတှအေတှကျတော့ မကျြနှာကိုပိုသေးသှယျစမေယျ့ Frame ကွီးပွီးကားတဲ့ မကျြမှနျပုံစံတှေ၊ Cat Eye ပုံစံတှေ၊ အဓိကက မကျြမှနျထောငျ့ကိုပျေါစတေဲ့ Frame မြိုးတှကေိုရှေးခယျြတတျဖို့ပါပဲ။ ကိုငျးသားပျေါတဲ့ လေးထောငျ့ဆနျတာမြိုးတှေ၊ Upsweat Frame မြိုးတှလေညျး အဆငျပွပေါတယျ။
(၃) လေးထောငျ့ဆနျတဲ့ မကျြနှာကပြိုငျရှငျ
လေးထောငျ့ဆနျတဲ့ မကျြနှာကတြှအေတှကျတော့ အဲ့လိုလေးထောငျ့ဆနျတာမြိုးကို ဖုံးဖို့ ဆနျ့ကငျြဘကျ Frame မြိုးတှဖွေဈတဲ့ ဘဲဥပုံ Frame မြိုး၊ Frame အဝိုငျးမြိုးကို ရှေးခယျြလို့ရပါတယျ။
သူတို့အတှကျကတော့ မကျြနှာအသှငျပွငျအနအေထားကိုက ပုံကလြှပပွီးသားဖွဈနတောမို့ ဘယျလို Frame မြိုးနဲ့မဆို လိုကျဖကျသူပါ။ အထူး Recommend ပေးခငျြတာဆို Geometric Shapes တှဖွေဈတဲ့ စတုရနျးပုံစံ၊ လေးထောငျ့ပုံစံတှရှေေးနိုငျပါတယျ။ မကျြလုံးသားတဈဝိုကျနားမှာ ပိုကယျြပွနျ့စတေဲ့ ပုံစံကိုရှေးခယျြဖို့တော့လိုပါတယျ။ ကိုယျ့ဆံပငျသားနဲ့ မကျြလုံးသားအရောငျကိုကွညျ့ပွီး လိုကျဖကျတဲ့ Frame အရောငျရှေးခယျြတာလညျး ပိုအဆငျပွပေါတယျ။
ဒီလောကျဆို ကိုယျ့မကျြနှာအနအေထားအရ လိုကျဖကျမယျ့ မကျြမှနျပုံစံလေးတှကေို စာဖတျပွီးဘဲဖွဈဖွဈ၊ ပုံလေးတှကွေညျ့ပွီးဘဲ ဖွဈဖွဈ ရှေးခယျြဝယျယူပွီး ကိုယျ့ရဲ့ Summer Look လေးကို ပွီးပွညျ့စုံအောငျ ဖနျတီးနိုငျပါပွီနျော။